गलकोटमा पनि ‘एक घर एक धारा’::Online News Portal from State No. 4
गलकोटमा पनि ‘एक घर एक धारा’
बागलुङ, २७ साउन – गलकोट नगरक्षेत्रमा पनि एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार काम थालिएको छ । सार्वजनिक धारा निर्माणले खर्च बढाउने र सदुपयोग नहुने भएपछि नगरपालिकाले संचालन गर्ने आयोजनामा पनि व्यक्तिगत धारा जडानको काम थालिएको हो । गत आर्थिक बर्षदेखि संचालित साना र ठूला आयोजनामा घरघरै धारा राख्ने काम थालिएको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले बताए । नगरपालिकाको हटिया, हरिचौर, मल्मको आँगखेत, बाँसखोला, नरेठाँटी जस्ता स्थान बजारीकरण भैसकेका छन् । त्यसबाहेक केही ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पानीको सदुपयोगका लागि सार्वजनिक भन्दा व्यक्तिगत धाराकै आवस्यकता देखिएको उनले बताए । गत आर्थिक बर्षदेखि संचालनमा आएको नगरपालिकाकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनामा पूर्ण रुपमा एकघर एक धाराको काम थालिएको वडा नं. २ का अध्यक्ष हेमन्त भण्डारीले बताए । नरेठाँटी जसपुर मसरा खानेपानी आयोजना नगरको ठूलो योजना हो । २३ करोड रुपैयाँ लागतको यो आयोजनाले वडा नं. २ का सबै घरमा खानेपानी खुवाउने लक्ष राखिएको छ । त्यसका लागि ५० घनमिटरको एक, २० घन मिटरको १ र १० घन मिटरको एकवटा ट्यांकी निर्माण भैसकेको छ । ‘पहिलो चरणमा कम्तिमा ६ सय ५० घरलाई पानी खुवाउने भनिएको छ, आवस्यकता अनुसार बढ्ने पनि हुन सक्छ’ भण्डारीले भने, ‘क्रमागत बजेट आउने भएकोले भएका कामलाई गुणस्तरीय बनाएर आगामी बर्ष पुरै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष राखेका छौं ।’ उपभोक्ता समितिले पनि व्यक्तिगत धारा ारखेर नियमित शुल्क उठाएमा मात्र खानेपानी आयोजनाहरु दिगो बन्ने ठहर गरेको अध्यक्ष रुमबहादुर कुँवरले बताए । वडाभित्रका साना तिना सबै मुहानलाई एकीकृत गरेर रिर्जभ गरेपछि आवस्यकता अनुसार बितरण गर्ने लक्ष राखिएको हो । त्यसका लागि ३ हजार ८ सय मीटर पाईपलाईन बिच्छ्याई सकिएको छ । पाईप लाईन, धारा र अन्य खर्च यकिन नभएकोले पहिलो चरणमा २३ लाखको स्टिमेट गरिएको हो । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई पोखरा तथा जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय समेतले यो आयोजनाको अनुगमन र प्राविधिक सहयोग गरेको छ । केन्द्रीय बजेटबाट संचालन भएपनि जिल्लाबाट प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रावधान छ । बास्तोला निर्माण सेवाले आयोजनाको काम गरिरहेको छ । कम्तिमा ३ बर्षपछि कुनैपनि घरमा पानीको अभाव हुन नदिने, सबै घरले शुल्क तिरेर खाने व्यवस्था सहित पानीको उचित सदुपयोग भएको बनाउने भण्डारीले बताए । ‘भएका साना तिना खानेपानी आयोजनाहरु पनि मुख्य आयोजनामा समावेश हुनेछन्’ उनले भने, ‘अब सबै वडामा यस्तै गरी एकीकृत प्रकारका योजना संचालन गर्ने लक्ष राखिएको छ ।’ सबै वडाले एकीकृत योजना बनाएर ल्याएपछि नगरपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार मार्फत आयोजना निर्माणको अभियान थालिने उनले बताए ।
नगरपालिकाले बिकास निर्माणको क्रममा खानेपानी, सिंचाई र वडा स्तरीय गौरवका योजनामा लगानी बढाउने नीति समेत लिएको गैह्रेले बताए । सबै वडामा भएका सडकलाई स्तरउन्नती गरेर चक्रपथको स्वरुप दिने गरी काम गरिएको उनले बताए । ‘चक्रपथका लागि छुट्टै काम गर्दैनौ, भएका लाई सदुपयोग गरेर बनाइन्छ’ उनले भने, ‘सडकको स्तरउन्नती गरेर जोखिम कम गर्ने उपाया खोज्दैछौं ।’ साना र हाल संचालनमा आएका सबै योजनामा थप मुहान पहिचान गरेपछि एकीकृत बनाइने छ ।